Bipute: Na-achọ Bipute na Mmezu Embroidery
Mọnde, Febụwarị 15, 2021 Mọnde, Febụwarị 15, 2021 Douglas Karr
Otu n'ime aha ezighi ezi nke mmiri mmiri bụ na ị na-efunahụ uru ka ị na-akwụ ndị ọzọ na-eweta ọrụ ibipụta ma mejupụta ngwaahịa gị. Nke ahụ abụghị eziokwu ma ọlị. Ihe esemokwu bụ nnukwu mbido mbido iji wuo ebe nchekwa na ebe mmezu iji kwado uto.
Ndị nkụda mmụọ nwere ike irite karịa 50% karịa ndị na-echekwa ngwaahịa ha. Tụkwasị na nke a, ụlọ ọrụ ndị na-emeghe mmezu ha ruo ire site na ahụmịhe na-ada mba karịrị 18% karịa uru.
Mbipụta na-ebipụta akwụkwọ na mmachi akpaaka nwere usoro mmezu siri ike na-acha ọcha na ụdị uwe dị iche iche na ihe ụlọ nwere ike ịhazi aha gị. Ma ị ga-achọ ịme ngwaahịa dị iche iche na etiti azụmahịa gị niile ma ọ bụ na ịchọrọ ịnye ngwaahịa nke aka gị maka ọrịre, Mbipụta bụ ụzọ dị mma iji bulie ngwa ngwa.
Akwụsịla ebe ahụ. Ọ bụ ezie na ndị na-ebipụta akwụkwọ bụ ndị na-eweta mbipụta akwụkwọ na ọrụ mmezu… ị ka ga-achọkwa ikpo okwu ecommerce yana azụmaahịa akpaaka iji kwụsị ịzụ ahịa ịzụ ahịa na nkwukọrịta ndị ọzọ.
Olee otú Mbipụta Ọrụ
A na-agabiga iwu gị site na ngwa ngwa Mbipụta na saịtị ecommerce gị… ka ị ghara ime ihe ọ bụla mana ị ga-arụ ọrụ na ihe okike gị ma zụọ ahịa gị.
Otu n'ime ike nke mbipụta akwụkwọ bụ injin mockup siri ike ya na ọtụtụ onyonyo ngwaahịa enwere ike tinye ya na saịtị ecommerce gị. Naanị bulite ihe okike gị, họrọ ụdị ngwaahịa na nkọwapụta, wee mepụta onyonyo ịchọrọ igosipụta na saịtị gị. Ọ dịghị mkpa maka photoshoots ma ọ bụ ụdị… ya niile wuru na-!
Mockup a Ngwaahịa Ugbu a
Wlọ nkwakọba Ihe na Mmezu
Mbipụta na-elekọta mbipụta akwụkwọ, nyefee, yana ịnakwere nloghachi nke ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na ihe kpatara nloghachi ahụ bụ ihe kpatara nkebi - ha na-akwụ ụgwọ mmefu ahụ.
Printful nwere ụlọ ọrụ 8 gburugburu ụwa, nwere ebe atọ na United States: abụọ na Charlotte, NC, otu na Valencia, CA, na ebe ọhụrụ ha ọzọ na Dallas, TX.
Mụtakwuo Banye maka Mbipụta
Na-ere ngwaahịa gị na Shopify
Nkwado m maka ikpo okwu ecommerce dị mfe iji bụ Shopify. Ọ bụ ezi nghọta, nwere igwe ndebiri zuru ezu, ma nwee njikọ dị ịtụnanya yana ọtụtụ nyiwe ndị ọzọ iji jikwaa, zụọ ahịa ma bulie azụmaahịa ecommerce gị.
Nzọụkwụ dị mfe:
Tinye ngwa ngwa ngwa ngwa iji zụọ ahịa
Tinye ngwaahịa ịchọrọ ịtinye na ụlọ ahịa gị.
Hazie nkọwa ngwaahịa gị.
Kwado ọnụego gị dị ndụ… ma ọ bụrụ na ịnwere mbupu n'efu, gbaa mbọ kpuchie nke ahụ na ọnụego gị.
Mepee Storelọ Ahịa shopify gị
Na-ebuli ma jikọta Klaviyo Marketing Automation
Ozugbo inwee saịtị ecommerce na-arụ ọrụ, ezughị. Aga m edebanye aha Klaviyo. Klaviyo ga-edozi ihe niile site na ntinye aka akwụkwọ akụkọ, onyinye popup (na ebumnuche mpụga), ihe ncheta ụgbọ ibu azụmahịa echefuru… na ihe niile dị n'etiti.
Ọ bụ ihe ịtụnanya n'elu ikpo okwu nke nwere akpaaka njikere ịga nke ọma na igbe… naanị hazie ha na gị ika, ịgbanwe ozi, ma mee ka ha dị ndụ.
Ahia Na Klaviyo
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọ m na edemede a.
Tags: tụfuo mbupuna-akụdammezu ecommerceecommerce laghachiembroideryihe ịchọ mma na-achọotú dobe mbupu na-arụ ọrụotú ebi-na-na-achọ ọrụKlaviyobipụta na inana-ebi akwụkwọShopify na klaviyoZụọ ahịa ma bipụtashopify na-ebipụta akwụkwọ klaviyonchachaacha ọcha labelụ mmezu
Typeform: Tụgharịa mkpokọta data n'ime ahụmịhe mmadụ